Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ku dayashada | Ragga Stylish
Waxaa hubaal ah in ilmo ahaan aad xustay in markaad weynaato aad rabto inaad noqoto qof lagu daydo. Si aad awood ugu yeelatid inaad gasho xirfadan shaqo doonka ah, waa inaad yeelataa jidh la mid ah kan heerarka quruxda ee xilligan ay rabaan. Qodobkaan waxaan ku sharaxeynaa tilmaamaha ugu muhiimsan si aad u ogaatid sida loo noqdo tusaale ka dibna haddii go’aanka uu yahay adiga iyo in kale adigu inaad ka mid noqoto.
Ma rabtaa inaad barato sida loo noqdo tusaale? Sii wad aqrinta inaan kuu sheegeyno wax walba.
1 Waxa ugu horeeya waa inaad rabto inaad noqoto moodel dhab ah
2 Tababbarka loo baahan yahay
3 Furayaasha noqoshada tusaale
4 Kala-duwanaanta qaabka
Waxa ugu horeeya waa inaad rabto inaad noqoto moodel dhab ah
Waa inaad ka fikirto gelitaanka mihnadani inaysan ahayn hiwaayad ama aad rumaysan tahay inaad si fudud ku kasban doonto lacag si aad u qurux badnaato. Waa xirfad leh tartan badan oo ay tahay inaad si aad ah ugu edbiso nolol maalmeedkaaga haddii aad rabto inaad guuleysato oo aad macaash ka hesho.
Tallaabada koowaad ee aasaasiga ah si aad u noqotid tusaale waxay raadineysaa hay'ad qaabeyn ah oo khibrad u leh inuu kaaala taliyo wax kasta oo aad u baahan tahay inaad bilowdo. Waqtiga ay hay'addu shaqaysay waa tilmaan wanaagsan oo ku saabsan waaya-aragnimada ay ku leedahay adduunka. Tani waa muhiim maadaama ay iyada ku xiran tahay inay ku siiso kalsooni iyo in kale.
Haddii aad rabto inaad gasho hay'ad qaabeyn ah, waa inaad wareysi shaqsi ah samaysaa. Qaabka ayaa horay loo sii ogaan karaa laga soo bilaabo carruurnimada hiddo-wadaha, muuqaalka wajiga ama tilmaamaha. Waa macquul in ilaa yaraantiina laguu yiri "tan waxaa loo isticmaalaa tusaale". Si kastaba ha noqotee, waxaad sidoo kale baran kartaa sida loo noqdo tusaale adiga oo aan ku sii degin hiddo-wadaha.
Muuqaal kale oo aasaasi ah oo nooc kasta oo ay tahay inuu ogaado waa qaabeyn. Khubarada wakaaladaha tusaalaynta waxay xaqiijinayaan in sida ugu habboon ay tahay in moodalku hanan karo illaa 50 sawirro ah. Sidan oo kale, waxaa jiri kara kala duwanaansho weyn natiijooyinka iyo tayo wanaagsan oo sawirro ah.
Wakaaladaha bar tusaalooyinka inay leeyihiin qaab u gaar ah oo u adeegso tixraac si loo abuuro isbeddello mooddo. Tani waa ficil ahaan waxa dhaca markii dadku dhahaan "mid baa dharka noocaas ah xirta oo qof walbaa wuu gashadaa." Fashion waa wax la mid ah.
Inaad noqotid qof ku dayasho mudan maahan oo kaliya inaad yeelato muuqaal wanaagsan. Khubaradu waxay adeegsadaan masaalnimada kubbadda cagta si ay u sheegaan in qof kasta oo muuqaal ahaan wanaagsan uusan noqon karin tusaale, laakiin ay tahay inaad ogaato ka hor intaadan sameynin.
Ha u maleynin taas maxaa yeelay waxaad tahay tusaale maahan inaad wax barato. Waxaa laga yaabaa inaadan baraneynin isla'egyada heerka labaad ee naxdinta leh, laakiin waa inaad qaadataa koorso tababar oo hal sano ah ama koorsooyin xagaaga oo aad u daran oo 3-bilood ah. Fasalladaan ayaa la dhigaa by stylists, farshaxan-yahannada qurxinta, joornayaasha iyo sawir qaadayaasha.
Moodelku waa inaan lagu qaadin moodooyinka, laakiin waa inuu isagu ama iyadu abuurtaa isbeddellada iyo qaabkiisa u gaarka ah. Waa inaad raadisaa dharka kugu habboon adiga oo kor u qaada muuqaalkaaga. Tani waa sida feejignaan dheeri ah loo soo jiidan doono oo moodyo looga samayn karo mid kasta oo iyaga ka mid ah. Markasta oo sumcaddaadu sii badato, ayaa lagaa aqoonsan doonaa aadna u badnaan doonto moodada aad abuuri doonto.
Moodooyinka ayaa u baahan inay dhex maraan iskuulka halkaasoo lagu baray inay sawir muujiyaan oo ay lugeeyaan. Maaha wax u baahan oo kaliya muuqaal wanaagsan waana intaas. Intaa waxaa dheer, markii aad noqotid tusaale, waa inaad raacdaa borotokool labadaba dhinacyada bulshada iyo shaqsiyadeed. Waa inaad yeelataa xoogaa caadooyin cunid ah iyo qaab nololeed kaa caawinaya inaad jirkaaga had iyo goor ku ilaaliso sida ugu fiican. Haddii aad tahay nin oo aad u baahan tahay inaad muruq marto, waa inaad ku biirtaa jimicsiga oo aad raacdaa a jimicsi samee si aad uhesho murqaha. Intaas waxaa sii dheer, waa inaad lahaataa cunto ka gaaban himilooyinkaaga oo aanad dayacin naftaada.
Qiimaha koorsooyinka tababarka si ay u noqdaan tusaale Waxay ku dhow yihiin 125 euro diiwaangelin iyo 10 qaybood oo ah 135 euro. Tani waa mid ka mid ah sababaha kugu kalifaya inaad si fiican u go’aansato haddii aad rabto inaad noqoto tusaale iyo inta aad rabto inaad gaarto.
Furayaasha noqoshada tusaale
Waxa jira talooyin iyo talooyin kaa caawin kara inaad sida ugu habboon uga faa’iideysato xirfaddaada. Mid ka mid ah dhinacyada aasaasiga ahi waa taas noqo mid waqtiga ilaaliya, masuul ah oo helitaan fiican leh. Tani waxay lagama maarmaan u tahay shaqadaada mustaqbalka, maadaama kuwa mas'uulka ka ah dugsiyadu badanaa u yeeraan tuurista hay'adaha qaranka halkaasoo feylasha loo soo bandhigo si loo shaqaaleeyo mid ka mid ah moodooyinkooda. Haddii aad rabto inaad qaaddo tallaabada caalamiga ah, waa mid aad u baahan, maxaa yeelay waa inaad sidoo kale taqaan luqadaha.
Ahaanshuhu waa mid aad u baahan oo naftaada kuma soo jiidi kartid cunnooyinka aad rabto, ama ma cabbi kartid aalkolo badan (mar waqti dheer ah wax ma yeeleyso), nasasho saacado kugu filan si aad uga fogaato isku aragtida mugdiga ama muujinta weji daciif ah, iwm .
Ahaanshuhu uma baahna inuu noqdo qof da ’sharci ah. Waxaa jira malaayiin moodal ah oo aan qaan gaarin isla markaana si siman ugu guuleysta. Si aad u noqotid tusaale iyo qof yar, waa inaad weydiisataa rukhsad gaar ah oo loo isticmaali karo si aad ugu shaqeyso sidii qof yar. Ogolaanshaha waa in laga codsadaa Waaxda Shaqada iyo Siyaasadaha Bulshada. Oggolaanshahan waa in lagu oggolaado ogolaanshaha waalidka maadaama uu ilmo yar yahay.
Haddii aad sawir fiican ka heshay xoqitaanka, waxaa suurtagal ah in buugaag ka socota wakaaladda qaabeynta uu kugu arko jidka oo uu kuu soo dhowaado si uu isugu dayo inuu kaa dhigo tusaale. Hadday taasi dhacdo, way isbaran doonaan, waxayna ku tusi doonaan kaarkooda shaqo waxayna kugu marti qaadi doonaan wareysi.
Ahaanshuhu kuma koobna oo keliya sawir qaadista ama sameynta bandhigyo moodays ah. Bookers ayaa inta badan indhaha ku haya dhalinyarada ku habboon shaqada. Waxaa jira rag aad u sawir qaata sida dumarka kale. Dadkaasi waxay xirfad dheer ku leeyihiin adduunka tusaalaha ah, Maaddaama ay da 'weyn yihiin ay samayn karaan ogeysiisyo qaata doorka hooyada ama aabbaha, xoghayaha, madaxa shirkadda, iwm. Sidan oo kale, fursadaha shaqadu way sii kordhayaan waadna sii wadi kartaa inaad ku noolaato tusaale ahaan xitaa haddii aadan da 'yarayn.
Macluumaadkan waxaan rajeynayaa inaad ku dhiirato oo aad taqaano sida loo noqdo tusaale. Xusuusnow in badanaa ay tahay mihnad lagu fuliyo daraasado kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Sida loo noqdo tusaale
Sida loo jaro sunnayaasha